တရုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံစိမ်းတွင်းရေအောက်စုပ်ယူစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နစ်မြုပ် Slurry Pump > ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံစခန်းတွင်းရေငန်ရည်စုပ်စက်
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံဌာနမှရေငုပ်နိုင်သောစုပ်စက်နှင့်ကန်တွင်းရေစုပ်စက်သည်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ မော်တာသည်အလုပ်အမှုဆောင်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်၊ နစ်မြုပ်ထားသောသဲပန့်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်ကိုစက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ အလုပ်လုပ်သောအခါရေစုပ်စက်သည်စွမ်းအင်ကို slurry medium သို့လွှဲပြောင်းရန် impeller လည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အချို့သောစီးဆင်းနှုန်းကိုထုတ်ပေးသည်။ အစိုင်အခဲစီးဆင်းမှုကိုမောင်းနှင်သည်နှင့် slurry ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသဘောပေါက်သည်။ တည်ဆောက်ပုံ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုစရိုက်လက္ခဏာများရှိသောပြည်တွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာကိုအသုံးပြုသည်။ ဝယ်သူ၏အခြေအနေအရ၊ ကွဲပြားသောနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများကိုရွေးချယ်ပါ။
သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ရေအောက်သဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့ရည်
Agitator နှင့်သဲကျောက်စရစ်ခဲများတင်ပို့ခြင်းအတွက် Hydraulic Submersible Slurry Pump ။ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စည်ပင်သာယာဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင်ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိမှုန့်များတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော Hydraulic Drives submersible slurry pump များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှသတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ရေအောက်စုပ်ယူနိုင်သောစုပ်စက်ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် Dredge မိလ္လာလျှပ်စစ်ရေအောက်မြုပ်သော Slurry Pump ရေမြုပ်ရွှံ့နွံရွှံ့နွံသဲစိုင်အခဲများ Slush Effluent ဒေါင်လိုက်နှစ်မြှုပ်နိုင်သောဟိုက်ဒရောလစ်တူးစက်တူးစက်
ငါတို့ထံမှဟိုက်ဒရောလစ် submersible သဲစုပ်စက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
Agitator ဖြင့် Centrifugal Dredge Sand Pump
စုပ်စက်ပါရှိသော Centrifugal Dredge Sand Pump. Submersible sand pumps များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် သဲပေးဆောင်ရန်အတွက် အသေးစား သဲရရှိသည့် ပရောဂျက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် ကတုတ်ကျင်းများ၊ မြေဆီလွှာများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် အစုအပုံများကို ဖယ်ရှားခြင်း/တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အထူးအသုံးချမှုအတွက် ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်း။
ဟိုက်ဒရောလစ် ရေငုပ်ကိရိယာများပါရှိသော သဲစုပ်စက်များ
လှုံ့ဆော်ပေးသော ပစ္စည်းများပါရှိသော ဟိုက်ဒရောလစ် ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော သဲပန့်များ။ DEPUMP ဟိုက်ဒရောလစ် ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော သဲပန့်များသည် သဲစုပ်ထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ သဲကို အလေးချိန်အားဖြင့် အခဲ၏ 70% အထိ ရေနှင့်ရောစပ်ပါသည်။ အရည်နှင့် အမှုန်အမွှားများ ရောနှောထားသော သဲနှင့် ကျောက်စရစ်များကို သဲနှင့် ကျောက်စရစ် ကိုင်တွယ်ရာတွင် အဆင်ပြေသည့် နည်းလမ်းအဖြစ် မကြာခဏ စုပ်ယူပါသည်။
MSS စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် Dredger Submersible Slurry Pump များသည် သတ္တုတွင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ကျယ်ပြန့်သော slurries နှင့် abrasive particles များကို ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လေးလံသောတာဝန်၊ လျှပ်စစ်-ရေအောက်ခံနိုင်သော slurry pumps များဖြစ်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံစခန်းတွင်းရေငန်ရည်စုပ်စက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံစခန်းတွင်းရေငန်ရည်စုပ်စက် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!